यस्तो छ संसारकै दुःखी बिरालो
२०७५ कार्तिक २१ बुधबार, एजेन्सी। यो विरालोलाई ईन्टर्नेट युजरले संसारको सबैभन्दा दु:खी विरालोको पगरी गुथाईदिए । लुहु नामको यो विरालो चाहे जे सुकै गरोस्, तर उसको चेहराको भाव कहिलै बदलिनेछैन । ... बाँकी अंश»
यी १० खानेकुरा खानुहोस् अनि हेर्नेुहोस नजिता
२०७५ कार्तिक २१ बुधबार, काठमाडौं । घरमा नयाँ सन्तान भित्रिनका लागि जति महिलाको प्रजनन क्षमता मजबुत हुन जरुरी छ, त्यतिक्कै मजबुत पुरुषको प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) पनि हुन जरुरी छ । यदी खानेकुरामा यी १० चीजहरु भएको खण्डमा पुरुषको प्रजजन क्षमतामा बृद्धि हुन्छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक २१ बुधबार, काठमाडौं । प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । प्रेम अन्धो हुन्छ भनिन्छ त्यसैले पनि केहि ध्यान पुर्‍याउन भने जरुरी छ। ... बाँकी अंश»
नातिले जिते यस्तो पदक, खुशी थेग्न नसक्दा हजुआमा चैट
२०७५ कार्तिक २१ बुधबार, एजेन्सी । ओलम्पिक खेलको महाआयोजनमा पदक जित्न जो कुनै एथलेटिक खेलाडिको सपना हुन्छ । साथै सो पदक पाएपछि खेलाडिको खुशीले सिमा रहनन् । ... बाँकी अंश»
यी कारण संसर्ग पछि निदाउछन् पुरुष
२०७५ कार्तिक २० मंगलबार, एजेन्सी। यहाँहरु सबैले सुन्नु भएकै हुनु पर्छ प्राय गरेर स्त्रीहरु आफ्नो पुरुषसँग यौनकृया गरे पछि गुनासो गर्ने गर्छन् किनभने यौन कार्य गरे लगतै प्राय पुरुषहरु निन्द्रामा पर्ने गर्दछन्।त्यसबेला स्त्रीहरु आफ्नो साथीलाई कुनै रोग लागेको छ भन्ने अनुमान गर्दछन्। तर उनीहरुको उक्त निदाउने बानीमा भने डराउनु पर्ने छैन। किनभने सबै पुरुषहरु सेक्स पछि निदाउने गर्दछन्। ... बाँकी अंश»
कुकुरलाई चुम्बन गर्नु हुन्छ ? सावधान ! ज्यान पनि जान सक्छ
२०७५ कार्तिक १८ आइतबार, एजेन्सी । तपाईले घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ ? कुकरलाई तपाई मायाँ गरेर चुम्बन गर्नुहुन्छ ? सावधान हुनुहोस् । कुकुरको मुखमा किस गर्नाले तपाई गंभीर प्रकारको रोगको शिकार बन्नसक्नु हुन्छ । तपाईको वफदार साथीको कारण तपाईको मृत्यु समेत हुन सक्छ। ... बाँकी अंश»
भगवान् अप्रसन्न भएको भन्दै भगवान् बिरुद्ध भक्तको अदालती उजुरी !
२०७५ कार्तिक १७ शनिबार, एजेन्सी । एक भक्त भगवानसँग यती आक्रोशित भएका छन् कि उनले भगवान बिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे । जब प्रहरीले कुनै मद्दत गर्न सकेन तब उनले अदालतमा भगवान् बिरुद्ध आवेदन दर्ता गराए । ... बाँकी अंश»
जीवनमा खुशी हुन मन छ ? याद राखौ संसर्गका केही टिप्स
२०७५ कार्तिक १६ शुक्रबार, एजेन्सी। सेक्स पति पत्नी बिचमा अनिवार्य आवश्यक्ता हो । जीवन सुखी बनाउन सेक्स जीवनमा रमाउनु जरुरी रहेको छ । तर हाम्रो समाजमा अनैतिक सेक्सका कारण समस्याहरु थपिएका छन् । त कतिपय अवस्थामा सेक्सका सामान्य ज्ञान समेत नजान्दा पतिपत्नी बिचमा असमझदारी बढ्दै पारपाचुके सम्म भएका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । ... बाँकी अंश»
अचम्मका बिरामी जसको आँखाबाट बग्छ रगतको आँसु
२०७५ कार्तिक १६ शुक्रबार, काठमाडौं । कुनै पनि मानिसको लागि बिरामी हुनु नौलो कुरा होइन । मानिसहरु भिन्न भिन्न किसिमको समस्याले ग्रासित हुने गर्छन् । यद्यपि संसारमा यस्तो पनि रोग छ, जसको कारण विना कुनै चोट आँखाबाट रगत आउने गर्छ । ... बाँकी अंश»
संसर्गको क्रममा मार्न खोजेको भन्दै प्रेमिका पक्राउ
२०७५ कार्तिक १५ बिहिबार, एजेन्सी। जर्मनीका एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिका विरुद्ध अनौठो किसिमको आरोप लगाएका छन् । जर्मनीका ३० वर्षीय टिम स्किमडटले आफ्नी ३३ वर्षीया प्रेमिका फ्रान्जिस्का हानसेन विरुद्ध वक्षस्थलले थिचेर मार्न खोजेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले फ्रान्जिस्कालाई पक्राउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनलाईनहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
संसर्गको क्रममा वक्षस्थलले थिचेर मार्न खोजेको भन्दै प्रेमिका पक्राउ
२०७५ कार्तिक १४ बुधबार, एजेन्सी। बेलायतकी एक महिलालाई जति पटक यौन सम्पर्क गरेपनि नपुग्ने समाचार त्यहाँका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन्। २४ सै घण्टा यौन सम्पर्कको बारेमा मात्र सोच्ने उनलाई यौनको प्यास नमेटिने रोग नै लागेको छ। ... बाँकी अंश»
मानिसले छाडेपछि प्रकृतिले सजाए
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, काठमाडौं । मानिसहरु आफ्नो स्वभावअनुसारको चाहना राख्ने गर्छन् । सबै ठाउँ मानिसहरुलाइ राम्रो लाग्दैन, त्यसैले उनीहरु आफ्नो बस्दै आएको ठाउँ छड्ने गर्छन् । मानिसले नै आफ्नो ठाउँ छाडेपछि कुनै पनि ठाउँको सौन्दर्य घट्दै जानु स्वाभाविक हो । ... बाँकी अंश»
सम्बन्धविच्छेदमा महिला अगाडि
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, विदुर । देवानी तथा फैज्दारी संहिता लागू भएपछि नुवाकोटमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला बढी छन् । ... बाँकी अंश»
'स्टाइलिस' व्यक्तिहरु जसलाई बुढेसकालले छोएन
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, काठमाडौं । मानिसको उमेर बढेसँगै मानिसको जोस र जाँगर पनि घट्दै जानु स्वाभाविक हो । वृद्ध वयमा पुगेपछि पक्कै पनि युवा अवस्थाको जस्तो उत्साह र जोस आउँदैन । उमेर बढ्दै गएपनि केही मानिसहरुमा भने युवा अवस्थाकै उत्साह र सुन्दर देखिने चाहना जीवित हुन्छ । ... बाँकी अंश»
नाक हेरेर चिन्नुहोस् केटाको स्वभाव
२०७५ कार्तिक १२ सोमबार, काठमाडौं । हात तथा चिनासँगै अब पुरुषको नाकको बनावटको आधारमा पनि केटा मान्छेहरुको स्वभावको बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । ज्योतिष शास्त्रले भविष्यवाणी गर्ने सामुद्रिक शास्त्रमा पुरुषको नाकको आकारको व्याख्या गरिएको छ । भनिन्छ जुन पुरुषको नाकको अगाडिको भाग टेढो छ । उसलाई पैसाको समस्या कहिलैपनि हुँदैन । उसले सहजै र सुखपूर्वक नै आफ्नो जीवन चलाउन सक्छ । ... बाँकी अंश»
विश्वभर ४ करोडभन्दा बढी यौनकर्मी, भारतमा मात्र ३० लाखभन्दा बढी
२०७५ कार्तिक १२ सोमबार, एजेन्सी । यौन व्यवासायलाई हाम्रो समाजमा घृणाको नजरले हेरिन्छ । यौन व्यवासायको लागि हाम्रो समाजमा न कुनै राम्रो स्थान छ न त हेराइ नै । धेरै मानिसहरुलाई यस कुराको जानकारी हुदैन की प्राय यस व्यवासायका महिला आफ्नो इच्छाले आएका हुदैनन् । उनिहरु मानव तस्करीको शिकार बनेर त अरुले फसाएर सो काममा आइपुग्छन् । ... बाँकी अंश»
१४ वर्षमै १० प्रतिशत युवतीले गुमाउँछन् कुमारीत्व
२०७५ कार्तिक १२ सोमबार, अमेरिका । अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयले यौन बानीव्यहोरासम्बन्धी गरेको अध्ययनअनुसार सत्र वर्षका युवतीमध्ये ३६ प्रतिशतले यौन सम्पर्क राखिसक्ने देखाएको छ । १४ देखि ९४ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार ८ सय ६५ जनामाथि अनलाइनबाट गरिएको अध्ययनले सो तथ्य निकालेको हो । सिएनएनका अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका युवतीहरु सोही उमेर समूहका युवकभन्दा यौन सम्पर्क राख्न बढी इच्छुक हुन्छन् । ... बाँकी अंश»
प्रेमिले यसो गरेपछि प्रेमिकाले गुमाइन् ज्यान
२०७५ कार्तिक ११ आइतबार, एजेन्सी । के तपाईले चुम्बनले मानिसको ज्यान गएको सुन्नु भएको छ ? क्यानडामा चुम्बन गर्दा प्रेमिकाले ज्याननै गुमाउनु परेको थियो । ... बाँकी अंश»